Somaliland: Raysal Wasaaraha Itoobiya Oo Shaaciyay Dalal Somaliland Ku Jirto Oo Ay Xoojinayaan Cilaaqaadka Ay La Leeyihiin - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Raysal Wasaaraha Itoobiya Oo Shaaciyay Dalal Somaliland Ku Jirto Oo Ay...
Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, Mudane Hailemariam Desalegn, ayaa sheegay inay dawladiisu kor u qaadayso cilaaqaadka siyaasadeed iyo dhaqaale ee ay la wadaagto dalalka jaarka ah oo ay ku jirto Jamhuuriyadda Somaliland.
Ra’iisul-wasaare Hailemariam Desalegn, wuxuu sidaas ka sheegay kulan Baarlamaanka Itoobiya ay su’aalo ku weydiinayeen khamiistii, siday faafisay Walta Information oo ka mid ah warbaahinta dawladda Itoobiya oo Wargeyska Dawan ka soo xigtay; “Waxaanu sii xoojinaynaa xidhiidhka dhaqaale iyo siyaasadeed ee aanu la leenahay Jabuuti, Soomaaliya,Koonfurta Suudaan iyo Somaliland,”ayuu yidhi Ra’iisul-wasaaruhu, waxaanu intaas raaciyay; “Itoobiya waxay sii wadaysaa inay kaalin weyn ka qaadato ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka(mandaqada). Waxaanu ku boorinaynaa beesha caalamka inay ballaadhiso taageeradeeda la xidhiidha arrimahan.”
Waxa kaloo uu Ra’iisul-wasaaruhu caddeeyay in rebshadihii dhexmaray dhawaan degaannada Soomaalida iyo Oromada Itoobiya ay sababeen dad kiro raadis ahi. Balse xiisada labadaas gobol aanay ku wajahnayn muranka xuduudaha ee u dhexeeya, waxaanu yidhi; “Kiro doon ayaa dhaliyay iskudhaca labada degaan, mana ah muran xuduudeed. Waxa jira dad doonaya inay kooto ku haystaan qaadka iyo ganacsiga suuqa madow ee degaankaas. Bulshada degaannadaasi sannado badan ayay wada noolaayeen oo ay wadaagayeen xuduudaha, mana jirto wax colaad ah oo u dhexaysaa.”
Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, waxa uu intaas ku daray in degaannadii qalalaasuhu ka dhacay nabadgelyo lagu dabaalay, iyadoo dawladda federaalku kaashanaysa dawlad degaannada.
Hailemariam Desalegn wuxuu warbaahinta labada gobol ee Oromada iyo Soomaalida Itoobiya ugu baaqay inay u shaqeeyaan si masuuliyad leh oo aan uga daraynin bulshada. Hadalka ka soo yeedhay Ra’iisul-wasaare Hailemariam Desalegn, ayaa muujinaya xidhiidhka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya oo iska kaashada nabadgelyada, siyaasadda iyo ganacsigaba.